प्रेमले केही नायक र धेरै मूर्ख पैदा गर्छ !::Nepali News Portal from Nepal
प्रेमले केही नायक र धेरै मूर्ख पैदा गर्छ !
विशेषगरी युवायुवतीमाझ लोकप्रिय ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ अर्थात् प्रणय दिवस । पाँचौँ शताब्दीबाट प्रेम उत्सवका रुपमा मनाउन थालिएको हो । यो दिवस पादरी सेन्ट भ्यालेन्टाइनको सम्झनामा हरेक फेब्रुअरी १४ मा मनाउने गरिन्छ । भ्यालेन्टाइनको प्रेमप्रतिको बलिदानीको सम्मान स्वरुप प्रेमिल युवा जोडीले यो पर्वका रुपमा मनाउने गरेका छन् ।
रोमन साम्राज्यका तत्कालीन सम्राट क्लाउडियस तृत्तीयलाई आफ्ना सैनिकहरू प्रेम र विवाहमा लागे भने सैनिक सेवा प्रभावित हुन्छ भन्ने डर थियो। त्यसैले आफ्नो राज्यमा प्रेम गर्न निषेध गरेका थिए। सोही राज्यका सन्त पादरी भ्यालेन्टाइनले सम्राटको निर्णय धर्मविरुद्ध हो भन्ने मान्थे । उनलाई ‘अनुशासनको दायराभित्र हुने प्रेम र आकर्षणमा ईश्वर पनि खुसी हुन्छन्’ भन्ने लाग्थ्यो। त्यसैले उनले युवायुवतीलाई प्रेम गर्न प्रेरित गर्दै सामूहिक विवाह कार्यक्रम सम्पन्न गरे।
तर सोही कारण सम्राटले उनलाई नियम पालना नगरेको आरोपमा सन् २६९ को फेब्रुअरी १४ मा मृत्युदण्ड दिए । त्यसरी प्रेमका नाममा जीवन उत्सर्ग गरेका भ्यालेन्टाइनकै नामले प्रणय दिवस खासगरी युवा प्रेमी जोडीले भव्य पर्वका रूपमा मनाउँदै आएका हुन् ।
प्रेमलाई परिभाषित गर्न कठिन छ । विश्वभर यसका अनेकौँ उखान प्रचलित छन् । तिनले पनि प्रेमलाई परिभाषित गर्ने कोसिस गर्छन् । प्रेम सम्बन्धी विभिन्न देशमा चर्चित १४ उखान :
प्रेम गर्नेले नै अक्सर रुवाउँछ । (अर्जेन्टिनी उखान)
जहाँ प्रेम हुन्छ, त्यहाँ अँध्यारो हुँदैन । (बुरुन्डियाली उखान)
प्रेम यस्तो रोग हो, जसले असाध्यै दुःख दिन्छ तर ज्यान लिँदैन । (मेक्सिकन उखान)
प्रेममा भिखारी र राजा बराबर हुन्छन् । (भारतीय उखान)
प्रेम गर्ने मुटु सदा जवान हुन्छ । (ग्रिक उखान)
मौका पाउने बित्तिकै पुरानो प्रेम र सुकेको दाउरा बल्न थालिहाल्छन् । (दक्षिण अमेरिकी उखान)
प्रेमले केही नायक र धेरै मूर्ख पैदा गर्छ । (स्विडिस उखान)
प्रेम, दुख र पैसालाई गोप्य राख्न सकिन्न । तिनले चाँडै नै स्वयंलाई धोका दिन्छन् । (स्पेनिस उखान)
राम्ररी समात्न जानिएन भने प्रेम गिलास झैँ फुट्छ । (रुसी उखान)
प्रेम रोगको उपचार गर्नसक्ने चिकित्सक संसारमै छैन । (अफ्रिकी उखान)
प्रेममा परेको मान्छेलाई सादा पानी पनि गुलियो लाग्छ । (चिनियाँ उखान)
प्रेमले तरबारबिना नै शासन गर्छ । (स्पेनिस उखान)
पागलपन बिनाको प्रेम, प्रेम नै होइन । (स्पेनिस उखान)
प्रेमले सुनौलो वाण चलाएर मान्छेलाई घाइते बनाउँछ । (स्पेनिस उखान)
सीता केसिको ‘झल्कोले सताउनि’ पन्चेबाजा गित सार्वजनिक
गजल संध्यामा सुनिए ८ गजलकारका ४० गजल
‘राम्रो देख्ने आँखा’
घुम्टेको लेकमुनी ११ देशका १५ मूर्तिकारको कार्यक्रम
कविता : खाली हातका गीत